အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ စားသုံးဆီတင်သွင်းမှုအပေါ် ကောက်ခံသည့်အခွန်နှုန်းထားများအား ထပ်မံပြင်ဆင်လျော့ချခြင်း | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ စားသုံးဆီတင်သွင်းမှုအပေါ် ကောက်ခံသည့်အခွန်နှုန်းထားများအား ထပ်မံပြင်ဆင်လျော့ချခြင်း » အထွေထွေ
Fri, 10/15/2021 - 15:01 -- journal_editor
CBIC ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် 48/2021-Customs အရ စားအုန်းဆီကြမ်း၊ ပဲပုတ် ဆီကြမ်းနှင့်နေကြာဆီကြမ်းတို့အပေါ် ကောက်ခံလျက်ရှိသော အခြေခံအကောက်ခွန်အား ၂.၅% မှ သုညရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ပြုပြင်သန့်စင်ထားသည့် စားအုန်းဆီ၊ ပဲပုတ်ဆီနှင့် နေကြာဆီတို့အပေါ် ကောက်ခံလျက်ရှိသော အခြေခံအကောက်ခွန်ကို ၃၂.၅% မှ ၁၇.၅% သို့လည်းကောင်း လျော့ချခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို့အတူ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် 49/2021-Customs အရ စားအုန်းဆီကြမ်းတင်သွင်းမှုအပေါ် AIDC ထပ်ဆောင်းအခွန် ၂၀% ကောက်ခံလျက်ရှိရာမှ ၇.၅% သို့လည်းကောင်း၊ ပဲပုတ်ဆီကြမ်းနှင့် နေကြာဆီကြမ်းတို့အပေါ် ကောက်ခံလျက်ရှိသော AIDC ထပ်ဆောင်းအခွန်ကို ၂၀% မှ ၅% သို့လည်းကောင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ အခြေခံအကောက်ခွန်နှင့် AIDC အခွန်နှစ်ရပ်ပေါင်းအပေါ် ကောက်ခံသည့် လူမှုဖူလုံရေး အထူးထပ်ဆောင်းအခွန် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအား ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါက ပြုပြင်သန့်စင်ထားသည့် စားအုန်းဆီ၊ ပဲပုတ်ဆီနှင့် နေကြာဆီများတင်သွင်းမှုအတွက် CIF တန်ဖိုးအပေါ် အခွန်စုစုပေါင်းမှာ ၁၉.၂၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ အလားတူ စားအုန်းဆီကြမ်းတင်သွင်းမှုအပေါ် အခွန်စုစုပေါင်း ၈.၂၅% နှင့်ပဲပုတ်ဆီကြမ်းနှင့် နေကြာဆီကြမ်းတို့အပေါ် သွင်းကုန်ခွန် စုစုပေါင်း ၅.၅% အသီးသီး ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ စားသုံးဆီများတင်သွင်းမှုအပေါ် ပြင်ဆင်လျော့ချသတ်မှတ်ခဲ့သည့် အခွန်နှုန်းထားများမှာ ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ နေ့မှ ၃၁-၃-၂၀၂၂ နေ့ အတွင်းသာ သက်ရောက်မှု ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း CBIC က ၎င်း၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် လတ်တလောမြင့်တက်လျက်ရှိသည့် စားသုံးဆီဈေးနှုန်းများအား လျော့ချနိုင်ရန်နှင့် ဘာသာရေးပွဲတော်များ ကျင်းပသည့်ရာသီကာလအတွင်း ပြည်တွင်း၌ ကုန်စည်များ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်မှုကို အထောက်အပံ့ ပြုရန် ယခုကဲ့သို့ သွင်းကုန်ခွန်များလျော့ချခြင်းဖြစ်သည်။ အခွန်နှုန်းလျော့ချပေးမှုက ကုန်ချိန် ၁ တန်လျှင် စားအုန်ဆီကြမ်း၌ ရူပီးငွေ ၁၄၀၀၀ ခန့်နှင့်ပဲပုတ်ဆီကြမ်းနှင့် နေကြာဆီကြမ်းတို့တွင် ရူပီးငွေ ၂၀၀၀၀ ခန့် အသီးသီး လျော့ကျစေဖွယ်ရှိသည်။
သို့ရာတွင် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် မလေးရှားနိုင်ငံဈေးကွက်၌ စားအုန်းဆီကြမ်း ၁ တန်လျှင် ရင်းဂစ်ငွေ ၁၅၀ မှ ၁၇၀ ခန့်အထိ ဈေးနှုန်းများ မြှင့် တင်ခဲ့ကြရာ အိန္ဒိယစားသုံးသူများမှာ အကျိုးခံစားခွင့် ပြည့်ဝစွာရရှိနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း၊ လက်လီ ဈေးကွက်၌ စားသုံးဆီသန့် ၁ ကီလိုဂရမ်ပေါ်တွင် ၆ ရူပီးမှ ၈ ရူပီး အထိသာ ကျဆင်းဖွယ်ရှိ ကြောင်း၊ ထို့အပြင် မိုးသီးနှံ ပဲပုတ်နှင့်မြေပဲတို့ ရိတ်သိမ်းထွက်ပေါ်မည့် အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်စွာ စားသုံးဆီများအပေါ် သွင်းကုန်ခွန်လျော့ချခြင်းက ၎င်းတို့၏ သီးနှံရောင်းဈေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို မြင့်တက်စေကြောင်းဖြင့် အိန္ဒိယ ဆီကြိတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (SEA) မှ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Atul Chaturvedi က ပြောဆိုပါသည်။
စားသုံးဆီများ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကို လျော့ပါးသက်သာစေရေးအတွက် အိန္ဒိယအစိုးရသည် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်လျက် ကုန်သွယ်မှုနှင့်အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ ဖြေလျော့မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စားအုန်းဆီနှင့် ပဲပုတ်ဆီတင်သွင်းရာ၌ ကုန်တန်ချိန်ပမာဏ အပေါ် ကောက်ခံသည့် အခွန်နှုန်းထားများအား ဇွန်လအတွင်း၌ လျော့ချခဲ့ပြီး၊ စားသုံးဆီများ၏ ဆိပ်ကမ်းအရောက် CIF တန်ဖိုးအပေါ် ကောက်ခံသော သွင်းကုန်ခွန်နှုန်းထားများအား စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှ စတင်လျော့ချမှုပြုခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စားသုံးဆီတင်သွင်းမှုမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၌ ၁၆၉၈၇၃၀ တန် ရှိပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တင်သွင်းခဲ့သော ၁ လအတွင်း စားသုံးဆီတင်သွင်းမှု အများဆုံးပမာဏ တန်ချိန် ၁၆.၅၁ သိန်းကို ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း SEA အသင်း၏ စာရင်းများအရသိရှိရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း စားအုန်းဆီတင်သွင်းမှုမှာ တန်ချိန် ၁၂.၆၂ သိန်း ရှိပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ၁ လတာအတွင်း တင်သွင်းမှုပမာဏ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ ၁၁ လ အတွင်း စားသုံးဆီ တန်ချိန် ၁၂၄၇၀၈၇၄ တန် တင်သွင်းခဲ့ပြီး ယခင်ကာလတူထက် ၂% ပိုမိုလာခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းပမာဏတွင် စားအုန်းဆီမှာ ၇၆၂၇၂၁၈ တန် ပါဝင်ကြောင်း၊ ၁-၁၀-၂၀၂၁ နေ့ရှိ ပြည်တွင်းစားသုံးဆီလက်ကျန်စုစုပေါင်းမှာ တန်ချိန် ၂၀.၀၅ သိန်းခန့်ရှိပြီး ဆိပ်ကမ်းများ၌ ထုတ်ယူရန်ကျန်ရှိသည့် ပမာဏ တန်ချိန် ၈၄၅၀၀၀ ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရ ကြောင်း အိန္ဒိယ ဆီကြိတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ဖော်ပြထားပါသည်။
Source: 1. India cuts import duty on cooking oils; September imports of palm oil are highest single month imports in 25 years, 13-10-2021, Economic Times
2. Notifications No. 48/2021-Customs and No. 49/2021-Customs, dated 13th October 2021 of the Department of Revenue, Ministry of Finance of India